Sawirro: Sudan oo safiir cusub usoo magacaawaday Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Sudan oo safiir cusub usoo magacaawaday Soomaaliya
Mareeg.com: Dowladda Sudan ayaa danjire cusub usoo magacaawaday dalka Soomaaliya, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta ka gudoomay waraaqihiisa aqoonsiga Safiirnimo.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Danjire Maxamed Yuusuf Cismaan oo kulan wadayeeshay ayaa waxa ay uga hadleen arrimo badan oo quseeya labada dal iyo sidii dowladda Sudan ay u sii xoojn lahayd taageerada ay Soomaaliya siineyso oo ay ka midyihiin deeqaha waxbarasho ee ay ardayda Soomaaliyeed ka helaan dalkaasi.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo kulanka kaddib la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in safaaradda Sudan ee Soomaaliya ay ka mid ahayd safaaradihii aan xirmin tan iyo markii ay bur burtay dowladdii dhexe, waxaana uu intaa ku daray in uu aad ugu faraxsanyahay in Muqdisho ay ku soo dhaweeyaan safiirka cusub ee dowladda Sudan u soo magacaawday Soomaaliya.
Safiirka cusub ee dowladda Sudan ee Soomaaliya Dajire Maxamed Yuusuf Cismaan oo isna la hadlay Warbaahinta ayaa tilmaamay in uu ku faraxsanyahay in warqadda aqoonsiga safiirnimo uu ka guddoomay Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana uu intaa ku daray in Madaxweynaha uu u gudbiyay dhambaal uu uga siday dhigiisa Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir.
Dalka Sudan ayaa tan iyo burburkii Soomaaliya safaarad uga furneyd magaalada Muqdisho, waxeyna dalkeeda martigelin iyo waxbarasho ku siisay kumanaan arday Soomaali ah.